Abesifazane abalahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-Covid | Scrolla Izindaba
Abesifazane abalahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-Covid
Uma kukhulunywa ngokulahlekelwa yimisebenzi, lolu bhubhane lwe-Covid-19 eNingizimu Afrika lihlukumeze abesifazane kakhulu kunabesilisa.
Ucwaningo olusha luthi imisebenzi emithathu yezigidi ilahlekile ngoNhlolanja nangoMbasa.
Kule misebenzi eyizigidi ezimbili elahlekile bekusebenza abesifazane – yize inani labesifazane belingafike ngisho kuhhafu wengxenye yabasebenzi.
Ucwaningo luthi cishe isigamu sephesenti (esingama-47) salabo abacwaningiwe, bathi izindlu zabo ziphelelwe yimali yokuthenga ukudla ngo-Mbasa wonyaka wezi-2020.
Ucwaningo lwenzuzo yamandla kazwelonke: nocwaningo olusheshayo lwe-coronavirus lwenziwe ezindlini eziyi-7,000.